Hoggaamiyeyaasha CORD oo dalbaday in bil gudeheeda lagu shaqaaleysiiyo xubnaha gudiga doorashada – The Voice of Northeastern Kenya
Hoggaamiyeyaasha CORD oo dalbaday in bil gudeheeda lagu shaqaaleysiiyo xubnaha gudiga doorashada
Hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ah ee CORD Raila Odinga ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in bishaan September gudeheeda la qoro xubnaha iyo saraakiisha cusub ee gudiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha dalka ee IEBC.
Mr Odinga oo maanta billaabaya booqasho hor leh oo uu ku tagayo gobolka Galbeedka dalka ayaa waxa uu dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan uu madxweynaha u soo magacaabo gudigaasi, si ay u badalaan xubnaha IEBC ee lagu wado in ay xafiisyada banneeyaan.
Raysul wasaarihii hore ee dalka ayaa isagoo ka hadlaayay munaasabad aas ah oo ka dhacday maamul goboleedka Siaya sheegay in ay qasab tahay in gudiga cusub ee IEBC ay howshooda billaabato ka hor inta aan la gaarin 30-ka bishaan September.
Socdaalka uu Raila Odinga ku tagay gobolka galbeedka ayaa yimid xili ay qaar ka mid ah xildhibaannada kasoo jeeda xisbiga talada haya ee Jubilee ay ku suganyihiin halkaas, iyagoo taageero uga raadinaya Jubilee.
Shacabka ku dhaqan gobolka galbeedka ayaa aad u taageersan isbahaysiga mucaaradka ah ee CORD iyagoo si weyn ugu codeeyay xiligii doorashada guud ay dalka ka dhacday bishii March ee sanadkii 2013-ki.
Mr Odinga oo ay wehlinayaan siyaasiyiin ka tirsan garabkiisa ayaa maanta booqashadaasi oo qaadan doonta 5 maalmood waxa uu ka billaabayaa deegaanno ka tirsan maamul goboleedka Kakamega.
← Booliska oo xiray dad loo heysto in ay taleefonno qaali ah ka xadeen shirkii TICAD
War bixin la soo saaray oo muujineysa in Musuqmaasuqa uu ku badanyahay xuduudaha dalka →